Author Topic: Nepali movies - kiss scenes (Read 21456 times)
« Reply #10 on: March 05, 2010, 11:45:25 PM »
tudhikel bro, aati yar..
namrata ko video ajhai normal lagne ta bhako chaina yar..
tyo vid ma pani kiss scene thiyo ra ?
« Reply #11 on: March 07, 2010, 12:23:12 AM »
Quote from: hidemyass on March 05, 2010, 11:45:25 PM
The video is not 'normal'
but she is soon going to bea'normal' actress soon.
« Reply #12 on: March 07, 2010, 12:23:32 AM »
आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ हाउस फुल
बिष्णु सुबेदी, पोखरा, २०६६ फाल्गुन २२, शनिवार
चलचित्र हेरेर हलबाट बाहिरिदै गरेका केही दर्शकहरुको आँखा रसाएका थिए । भन्दै थिए 'फिल्मले त हँसायो सिट्ठी र ताली बजाउन बाध्य बनायो अनि अन्त्यमा त रुवायो पनि ।' पोखरास्थित बाराही क र ख हलबाट आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ चलचित्र हेरेर बाहिरिदै गर्दा दर्शकहरुले यस्तो प्रतिकिया दिएका हुन् ।
यतिमात्रै हैन कमेडी एक्सन र लभस्टोरीले भरिपूर्ण चलचित्र आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छले बाराही क र ख मा शनिबार ३ शो नै हाउस ओभार ब्यापारको रेकर्ड कायम गर्‍यो । टिकट काउण्टरका श्रीराम अधिकारीले भने 'यो चलचित्रको प्रारम्भिक ब्यापार हेर्दा चलचित्र हिट हुनेमा शंका छैन । लामो समय पछाडि यो चलचित्रले हाउस ओभार ब्यापार गरेको छ ।'
चलचित्र सुरु हुन एकघण्टा अघि नै दर्शकहरु फिल्म हेर्नका लागि टिकट काट्न पंक्तिबद्ध देखिन्थे । बिराज भट्टको एक्सनलाई मुकेश ढकालको साथ अनि सधै एक्सनमा मात्र देखिने बिराजको एक्सनसँगै देखिएको मानवीय संवेदनाले दर्शकको मन छोएको रहेछ । त्यत्तिमात्र कहाँ हो र सधै ग्याल्मर भूमिकामा देखा पर्ने रेखा थापा यो सँगै असल प्रेमिकाको रुपमा चलचित्रमा प्रस्तुत भएकी छिन् । अझ अरुणिमा लम्सालको कामको त सबैले प्रशंसा गर्न चुकेनन् । चलचित्र सुरु भएदेखि नै हाँस्दै एक्सन भूमिकामा नायकहरुलाई देख्दा सिट्ठी र ताली बजाएका दर्शकहरु मध्यान्तरपछि अलि बढी नै भावुक देखिन्थे ।
बाबु-आमाको भूमिकामा देखा परेका देशभक्त खनाल र अञ्जु महर्जनको अभिनयले उनिहरुमा भाबुकता उत्पन्न गराएको थियो त्यसमा साथ दिएको थियो दीनेश डिसीको भूमिकाले । दर्शकहरुलाई हसाउँनका लागि इसान राउत जिरे को भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । नागसँग रेखा थापाले गरेको आइटम डान्स र करिब १ मिनेट लामो अरुणिमा र मुकेशबीचको हट किस सिनले दर्शकको मन जितेको थियो ।
« Reply #13 on: March 07, 2010, 12:24:10 AM »
Quote from: kurakani on January 11, 2010, 05:08:33 PM
अंग्रेजी चलचित्र हेरेर टङ्गकिस गर्न जानियो
माया अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो किस । स-साना बालबालिकालाई काखमा राखेर गालामा म्वाइँ खानु वा राम्रो कुकुर तथा खरायोको बच्चालाई म्वाइँ खानु पनि किस नै हो । आमाबुबालाई माया गर्दा गालामा म्वाइँ खानु पनि किस नै हो । अति माया लाग्दा किस गरेर माया व्यक्त गरिन्छ ।
प्रेमी-प्रेमिका अथवा पति-पत्नीमा पनि माया धेरै भएपछि किस गरिन्छ । त्यस्तो किस निधारमा, गालामा र ओठमा गरिन्छ । अति नै माया गरिने अवस्थामा 'टङ्गकिस' गरिन्छ । चलचित्रको विषय मायामा आधारित हुने भएकाले चलचित्रमा माया अभिव्यक्त गरेको देखाउन अचेल किससिन राख्न थालिएको छ । मैले पनि छ वटाजति चलचित्रमा नायकलाई किस गरेकी छु । मानिसहरू हेर्दै नहेरी हो कि बुझ्दै नबुझी त्यसलाई 'टङ्गकिस' भन्छन् र मलाई 'किस क्विन' रे । टङ्गकिस मायाको गहिराइमा पुगेपछि गरिन्छ ।
मैले मेरो श्रीमान्सँग प्रेम गर्दा पहिलो पटक 'टङ्गकिस' गरेकी थिएँ । त्यतिबेला 'डेटिङ' भन्ने चलन थिएन । त्यसैले कि उहाँको घर नभए मेरो घरमा हामी भेट्थ्यौं । सायद उहाँकै घरमा उहाँ र मैले एकान्तमा पहिलो पटक 'टङ्गकिस' गरेका थियौं । त्यतिबेला 'टङ्गकिस' गर्न हामी दुवैले जानेनौं । अहिले त अंग्रेजी चलचित्र हेर्दा-हेर्दा टङ्गकिस गर्न जानियो । उहाँ र म टङ्गकिस गर्दा एक-अर्कामा हराउँछौं । सबैको अनुभव यो मामिलामा एकै प्रकारको हुन्छ । टङ्गकिस गर्दा कहिल्यै आँखा खोलिँदैन । यत्रो ठूलो संसारमा हामी दुई मात्र छौ कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । मैले विवाहपछि त्यस्तो अनुभव पटक-पटक सँगालेकी छु ।
« Reply #14 on: March 07, 2010, 12:27:52 AM »
नायिकका अरुणिमाको 'किस' अनुभव
काठमाडौ, फाल्गुन २२ - माया अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो किस । स-साना बालबालिकालाई काखमा राखेर गालामा म्वाइँ खानु वा राम्रो कुकुर तथा खरायोको बच्चालाई म्वाइँ खानु पनि किस नै हो । आमाबुबालाई माया गर्दा गालामा म्वाइँ खानु पनि किस नै हो । अति माया लाग्दा किस गरेर माया व्यक्त गरिन्छ । प्रेमी-प्रेमिका अथवा पति-पत्नीमा पनि माया धेरै भएपछि किस गरिन्छ । त्यस्तो किस निधारमा, गालामा र ओठमा गरिन्छ । अति नै माया गरिने अवस्थामा 'टङ्गकिस' गरिन्छ । चलचित्रको विषय मायामा आधारित हुने भएकाले चलचित्रमा माया अभिव्यक्त गरेको देखाउन अचेल किससिन राख्न थालिएको छ । मैले पनि छवटाजति चलचित्रमा नायकलाई किस गरेकी छु । मानिसहरू हेर्दै नहेरी हो कि बुझ्दै नबुझी त्यसलाई 'टङ्गकिस' भन्छन् र मलाई 'किस क्विन' रे ।
टङ्गकिस मायाको गहिराइमा पुगेपछि गरिन्छ । मैले मेरो श्रीमान्सँग प्रेम गर्दा पहिलो पटक 'टङ्गकिस' गरेकी थिएँ । त्यतिबेला 'डेटिङ' भन्ने चलन थिएन । त्यसैले कि उहाँको घर नभए मेरो घरमा हामी भेट्थ्यौं । सायद उहाँकै घरमा उहाँ र मैले एकान्तमा पहिलो पटक 'टङ्गकिस' गरेका थियौं । त्यतिबेला 'टङ्गकिस' गर्न हामी दुवैले जानेनौं । अहिले त अंग्रेजी चलचित्र हेर्दा-हेर्दा टङ्गकिस गर्न जानियो । उहाँ र म टङ्गकिस गर्दा एक-अर्कामा हराउँछौं । सबैको अनुभव यो मामिलामा एकै प्रकारको हुन्छ । टङ्गकिस गर्दा कहिल्यै आँखा खोलिँदैन । यत्रो ठूलो संसारमा हामी दुई मात्र छौ कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । मैले विवाहपछि त्यस्तो अनुभव पटक-पटक सँगालेकी छु ।
« Reply #15 on: March 07, 2010, 06:19:32 AM »
किसको प्रचारप्रति अरुणिमा असन्तुष्ट
लक्ष्मण सुवेदी, काठमाण्डौ, २०६६ फाल्गुन २१, शुक्रवार
कथा मन परे र चरित्र तगडा भए किस सिन दिन आपत्ति नहुने धारणा राख्छिन् नायिका अरुणिमा लम्साल । तर, मोफसलका दुई दर्जन हलमा शुक्रबारदेखि प्रदर्शन हुन लागेको आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ फिल्ममा नवनायक मुकेश ढकालसँग आफूले दिएको टंक किसको प्रचारप्रति भने उनले असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।
करिब एक मिनेट लामो सो किस सिन कथाको मागअनुसार नै गरेको दाबी गर्दै अरुणिमा भन्छिन्, 'हलमा हेर्न दर्शकलाई मनोरञ्जन होस् भनेर सट दिएँ । तर, उहाँहरूले सम्झौताबमोजिम काम गर्नुभएन । आउनु आइहाल्यो । अब मलाई आपत्ति छैन ।' आफू घरपरिवारमा त्यस्ता कामुक दृश्यले असर पार्ला भन्ने ठानेर उक्त किस सिन मिडियामा नल्याउने सर्त राखेको बताउँदै उनले भनिन्, 'अब मेरो केही गुनासो छैन । हुनु भइहाल्यो । मेरो परिवार बुझ्झकी छ । केही असर पदैन ।'
फिल्ममा अर्को एउटा दृश्यमा अरुणिमाले लगाएको मिनिस्कर्ट पंखा लगाएर उठाइएको छ । त्यो कामुक दृश्य पनि सहमतिमै गरेको खुलासा अरुणिमाको छ । 'कलेजका उटपट्याङ केटाहरूले पंखा लगाएर मेरो स्कट उडाउँछन् । दृश्य रमाइलो छ,' फिल्ममा आफूले पाएको रोलअनुसार निकै राम्रो काम गरेको जिकिर गर्दै उनी भन्छिन्, 'पंखा लगाएर स्कर्ट उडाए पनि मैले भित्र हापपाइन्ट लगाएकी छु । सिन भल्गर लाग्दैन ।'
« Reply #16 on: March 08, 2010, 12:22:26 PM »
« Reply #17 on: March 09, 2010, 08:43:28 AM »